ဘာစီလိုနာအသင်း ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားရဖို့ ဖိအားပိုများနေပြီလား ??? – Myan Ball
ဘာစီလိုနာအသင်း ချန်ပီယံလိဂ် ဖလားရဖို့ ဖိအားပိုများနေပြီလား ???
ဘာစီလိုနာ အသင်းရဲ့ကွင်းလယ် ကစားသမား အသစ် တစ်ဦး ဖြစ်သူ ဖရန်ကီဒီဂျောင်က ဘာစီလိုနာ အသင်းမှာ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ရဖို့ ဖိအား ပိုများကြောင်း ဖွင့်ဟ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ အေဂျက်စ် အသင်းနဲ့ အတူ ရီးရဲယ်မက်ဒရစ်၊ ဂျူဗင်တပ်စ် တို့လို အသင်းတွေကို အနိုင်ယူ ကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဒီဂျောင်ဟာ လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ဘာစီလိုနာ အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရို (၇၅) သန်းနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ ရောက်ရှိ လာခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲမှာ အစဉ်အလာရှိ ထိပ်တန်း ကလပ် အသင်း တစ်သင်း ဖြစ်ပေမယ့် (၂၀၁၅) ခုနှစ်မှာ ဂျူဗင်တပ်စ် အသင်းကို အနိုင်ရကာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ရယူပြီးနောက်ပိုင်း လက်ရှိ အချိန် အထိ ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ အသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီမှာလည်း ချန်ပီယံလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး အနေအထား အထိ ရောက်ရှိခဲ့ပေမယ့် လီဗာပူး အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ လေးဂိုးပြတ်နဲ့ အရှက်တကွဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကြောင့် နှစ်ကျော့ပေါင်း ၄-၃ ဂိုးနဲ့ ဆီမီးဖိုင်နယ် အဆင့်ကနေ လှည့်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး ဘာစီလိုနာ အသင်းမှာ ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ရဖို့ ပိုမို ဖိအားများတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဖရန်ကီဒီဂျောင်က “လာမယ့် နှစ်မှာ ဘာစီလိုနာ အသင်းက ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ရဖို့ မျှော်လင့်ချက် ကြီးကြီးမားမား ထားနေမှာ ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီလိုမျိုး စွမ်းဆောင်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်။ ဘယ်သူကမှ အေဂျက်စ် အသင်းကို ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ရဖို့ မမျှော်လင့်ကြပေမယ့် ဘာစီလိုနာမှာတော့ ဖိအားက အရမ်းကို များပြားပါတယ်။”
“နယ်သာလန် ဖလားနဲ့ လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပရိသတ်တွေက ကျွန်တော်တို့ကို ဆွဲဆောင်မှု ရှိတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပွဲတိုင်း နိုင်စေချင်ပါတယ်။ ဘာစီလိုနာမှာလည်း ဒီလိုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ် ဖလား ရဖို့တော့ ပိုပြီး ဖိအား များပြားပါတယ်။ ခင်ဗျားသာ ဘာစီလိုနာ အသင်းမှာ ဆိုရင် ရှိသမျှ ဆုဖလား အားလုံးကို ရယူနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ပရိသတ်တွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ဖို့ အတွက် လှပတဲ့ ကစားပုံကို သဘောကျပြီး ကွင်းထဲကို ပရိသတ်တွေ လာကြည့်တာက ပွဲကောင်း တစ်ပွဲကို ခံစားနိုင်ဖို့ အတွက် ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ဒါက ယိုဟန်ခရိုက်ဖ်ရဲ့ ဒဿနလို့ ကျွန်တော်ထင်ပြီး အေဂျက်စ် အသင်းနဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင်းတို့မှာ ဒီဒဿနတွေက အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။” ဟု ဖွင့်ဟ ပြောကြားသွားခဲ့ကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်။
ဘာစီလိုနာ အသငျးရဲ့ကှငျးလယျ ကစားသမား အသဈ တဈဦး ဖွဈသူ ဖရနျကီဒီဂြောငျက ဘာစီလိုနာ အသငျးမှာ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ရဖို့ ဖိအား ပိုမြားကွောငျး ဖှငျ့ဟ ပွောကွား သှားခဲ့ပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ရာသီ ခနျြပီယံလိဂျပွိုငျပှဲမှာ အဂေကျြဈ အသငျးနဲ့ အတူ ရီးရဲယျမကျဒရဈ၊ ဂြူဗငျတပျဈ တို့လို အသငျးတှကေို အနိုငျယူ ကြျောဖွတျနိုငျခဲ့တဲ့ ဒီဂြောငျဟာ လကျရှိ အခြိနျမှာတော့ ဘာစီလိုနာ အသငျးကို ပွောငျးရှကွေ့ေး ယူရို (၇၅) သနျးနဲ့ ပွောငျးရှေ့ ရောကျရှိ လာခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။
ဘာစီလိုနာ အသငျးဟာ ခနျြပီယံလိဂျ ပွိုငျပှဲမှာ အစဉျအလာရှိ ထိပျတနျး ကလပျ အသငျး တဈသငျး ဖွဈပမေယျ့ (၂၀၁၅) ခုနှဈမှာ ဂြူဗငျတပျဈ အသငျးကို အနိုငျရကာ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ရယူပွီးနောကျပိုငျး လကျရှိ အခြိနျ အထိ ခနျြပီယံလိဂျ ဗိုလျလုပှဲနဲ့ ဝေးကှာနခေဲ့ပါတယျ။ ဘာစီလိုနာ အသငျးဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီမှာလညျး ခနျြပီယံလိဂျ ဗိုလျလုပှဲနဲ့ အနီးစပျဆုံး အနအေထား အထိ ရောကျရှိခဲ့ပမေယျ့ လီဗာပူး အသငျးကို အဝေးကှငျးမှာ လေးဂိုးပွတျနဲ့ အရှကျတကှဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တာကွောငျ့ နှဈကြော့ပေါငျး ၄-၃ ဂိုးနဲ့ ဆီမီးဖိုငျနယျ အဆငျ့ကနေ လှညျ့ပွနျခဲ့ရပါတယျ။
ဒီလိုမြိုး ဘာစီလိုနာ အသငျးမှာ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ရဖို့ ပိုမို ဖိအားမြားတာနဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ ဖရနျကီဒီဂြောငျက “လာမယျ့ နှဈမှာ ဘာစီလိုနာ အသငျးက ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ရဖို့ မြှျောလငျ့ခကျြ ကွီးကွီးမားမား ထားနမှော ဖွဈပွီး ကြှနျတျောတို့ ကိုယျတိုငျကလညျး ဒီလိုမြိုး စှမျးဆောငျနိုငျမယျလို့ မြှျောလငျ့နပေါတယျ။ ဘယျသူကမှ အဂေကျြဈ အသငျးကို ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ရဖို့ မမြှျောလငျ့ကွပမေယျ့ ဘာစီလိုနာမှာတော့ ဖိအားက အရမျးကို မြားပွားပါတယျ။”
“နယျသာလနျ ဖလားနဲ့ လိဂျပွိုငျပှဲတှမှော ပရိသတျတှကေ ကြှနျတျောတို့ကို ဆှဲဆောငျမှု ရှိတဲ့ ပုံစံနဲ့ ပှဲတိုငျး နိုငျစခေငျြပါတယျ။ ဘာစီလိုနာမှာလညျး ဒီလိုပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျ ဖလား ရဖို့တော့ ပိုပွီး ဖိအား မြားပွားပါတယျ။ ခငျဗြားသာ ဘာစီလိုနာ အသငျးမှာ ဆိုရငျ ရှိသမြှ ဆုဖလား အားလုံးကို ရယူနိုငျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ကြှနျတျောက ပရိသတျတှကေို ဆှဲဆောငျနိုငျဖို့ အတှကျ လှပတဲ့ ကစားပုံကို သဘောကပြွီး ကှငျးထဲကို ပရိသတျတှေ လာကွညျ့တာက ပှဲကောငျး တဈပှဲကို ခံစားနိုငျဖို့ အတှကျ ဖွဈတယျလို့ ကြှနျတျောထငျပါတယျ။ ဒါက ယိုဟနျခရိုကျဖျရဲ့ ဒဿနလို့ ကြှနျတျောထငျပွီး အဂေကျြဈ အသငျးနဲ့ ဘာစီလိုနာ အသငျးတို့မှာ ဒီဒဿနတှကေ အစိတျအပိုငျး တဈခုလို ဖွဈနတေယျလို့ ထငျပါတယျ။” ဟု ဖှငျ့ဟ ပွောကွားသှားခဲ့ကွောငျး သိရှိ ရပါတယျ။
မက်ဂွိုင်းရားကို ခေါ်ယူနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ချက်ရှိနေဆဲဖြစ်တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်း
မန်ယူရဲ့အတွင်းပိုင်းပြသနာများစွာရှိတာကြောင့် ဖာဂူဆန်ဆီကအကူညီတောင်းခံနေရတဲ့ ဆိုးလ်ရှား
PSG အသင်းရဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဖြစ်သူ နေမာက လက်ရှိ အချိန်မှာ အသင်းက ထွက်ခွာဖို့ ပြင်ဆင် နေပြီး အသင်းဟောင်း ဘာစီလိုနာ အသင်းကို ပြန်လည် ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အတွက် သတင်းများ ကျယ်လောင်စွာ ထွက်ပေါ်လျက် […]
“ဘာစီလိုနာ အသင်းနဲ့ အတူ PSG ကို အနိုင်ယူခဲ့တာက ဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံး အခိုက်အတန့်တွေထဲက တစ်ခုပါ။” #နေမာ
ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင် နည်းပြဟောင်း ဖာဂူဆန်က အသင်းမှာ သူရှိစဉ်က အဓိက အားကိုးခဲ့ရတဲ့ အာရှသား ပတ်ဂျီဆန်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောင်တရခဲ့ဖူးတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို ဖွင့်ဟ ပြောကြား သွားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ဘောလုံး လောကရဲ့ […]
ပတ်ဂျီဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီး နေ့စဉ်နေ့တိုင်း နောင်တရနေရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခု ရှိခဲ့တဲ့ ဖာဂူဆန်
ရော်နယ်ဒို၊ မက်ဆီတို့ ခေတ်လွန် ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို ရယူနိုင်မယ့် ကစားသမား တစ်ယောက် အဖြစ် တစ်ပ်ပေးခြင်း ခံထားရတဲ့ အမ်ဘာပေက လက်ရှိ အချိန်မှာတော့ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုနဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် ဆုဖလားမှာ […]
ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား နဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးဆုမှာ အမ်ဘာပေတစ်ယောက် ဘာကိုရွေးမလဲ ?
လီဗာပူးအသင်းဟာ ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရရှိခဲ့တာကြောင့် ရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အိုင်ဖုန်းကာဗာများကို လက်ဆောင်အဖြစ် ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ လီဗာပူးအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဖိုင်နယ်မှာ အင်္ဂလန်ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ စပါးအသင်းကို (၂-၀) နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဥရောပမှာအောင်မြင်မူရရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလက်ဆောင်ကို ယခုနှစ် လီဗာပူးအသင်းရဲ့ကစားသမားး (၂၇) ဦးအပြင် နည်းပြ […]
ရွှေနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ အိုင်ဖုန်းကာဗာများ လက်ဆောင်ရရှိခဲ့ကြတဲ့ လီဗာပူးအသင်းသားများ
ဟော်လန်တောင်ပံကစားသမား ရိုင်ယန်ဘာဘယ်က အသင်းဖော် ဗာဂျယ်ဗန်ဒိုက်မှာ ဖေဘီယို ကန်နဗားရိုးနောက်ပိုင်း ဘောလွန်းဒီအောဆုကို ရရှိသည့် နောက်တန်းကစားသမားဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ ဘာဘယ် နှင့် ဗန်ဒိုက်တို့ဟော်လန်အသင်းသည် တနင်္ဂနွေနေ့က ယူအီးအက်ဖ်နေရှင်းလိဂ် ဗိုလ်လုပွဲတွင် ပေါ်တူဂီအသင်းအား (၁-၀) ရလဒ်ဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရပါတယ်။ […]
၆ နှစ်ကြာမြင့်တဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက် ကြည့်ရှုသူအများဆုံး ပွဲစဉ်ကို BT Sports ရုပ်သံလိုင်းက ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ လီဗာပူးနဲ့ စပါးအသင်း ကစားခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ်ဗိုလ်လုပွဲမှာ ဒီဂျစ်တယ်နဲ့ ရုပ်သံပလက်ဖောင်းတွေကနေ ကြ ည့်ရှုသူ ၁၁.၃ သန်း ရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ […]
BT Sports သမိုင်းမှာ ကြည့်ရှုသူအများဆုံး ပွဲစဉ်